Nagarik Shukrabar - मिलन चाम्सको फण्डा
शनिबार, २७ असार २०७७, ०२ : ३८
मिलन चाम्सको फण्डा
शुक्रबार, ०३ जेठ २०७६, ०८ : २३ | शुक्रवार
तानतुन गरेर फिल्म बनाउनु मिलन चाम्सको पहिचानै भइसक्यो । फिल्म झुर भयो भनेर लेख्न पनि डरमर्दो । सिधै भनिदिन्छन्, ‘मेरो फिल्मबारे नराम्रो लेखिदिनुभयो भने त म सुसाइड गर्छु, श्राप दिन्छु ।’
जति तर्साए पनि झुरलाई कसरी राम्रो भन्नु हौ ? झुर उत्पादन झुरै भनेर आयो । उनले सञ्चारकर्मीलाई श्राप दिए कि दिएनन् उनी नै जानून् ।
पछिल्लो समय फेरि के भयो कुन्नी उनलाई फेसबुकमै ठोकिदिए, ‘वीर विक्रम २’ मेरो अन्तिम फिल्म ।’ तर उनको यो भनाइ पनि लामो समय टिकेन । फेसबुकमा गरेको यो स्टाटस पनि डिलेटी हाले । तर स्टाटस पढ्न भ्याएका जतिले चाम्सले फिल्म क्षेत्र छाड्न लागेको अड्कल लगाए । सन्देश पनि त्यस्तै त थियो ! तर केही समयपछि नै उनले आफूले निर्देशन गरेको ‘ब्लाइन्ड रक्स’ फिल्मको युट्युब लिंक हाल्दै भने, ‘आगामी दिनमा मेरो कर्मप्रति हौसला मिलेको छ ।’ यसले उनी अझै फिल्म क्षेत्रमै रहने संकेत गरेको छ । पहिलो स्टाटस फिल्म चलाउने फण्डा हो या आवेग या पक्का निर्णय खुलेन । तर यत्ति चै खुल्यो ‘मिलन साह्रै अस्थिर छन् ।’
साम्राज्ञी शाह भर्सेज भुवन केसी
नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी देवी शाहले निर्माता, निर्देशक तथा कलाकार भुवन केसीले पाँच वर्षअघि आफू अभिनित पहिलो फिल्म ‘ड्रिम्स’का बेला आफूलाई सुटिङ सेटमा दुव्र्यवहार गरेको, जापान भ्रमणका बेला अनावश्यक रुपमा नजिक आउन प्रपञ्च रचेको अभिव्यक्ति दिएसँगै कलाकार केसीले चलचित्र कलाकार संघमा अभिनेत्रीले लगाएको आरोपको छानबिन गरिपाऊँ भन्दै निवेदन दिएकी छिन्।
के प्रेममा छिन् वर्षा ?
मानिस प्रेममा पर्‍यो भने फूल, जून, आकाश मात्रै होइन, हरेक चिजमा खुशी देख्छ भन्छन्। भनाइमा कत्तिको सत्यता छ, त्यसको मापन गर्न नसके पनि, अनुमान भने लगाउन सकिन्छ।
रिस पोख्दै सुस्मा
नायिका सुस्मा कार्की काम कम र विवादास्पद टिप्पणी गरेर धेरै चर्चामा आएकी नायिका हुन्। प्रायः निर्माता–निर्देशक पनि उनको काम देखेर तर्सिन सुरु गरिसकेका छन्।